Dhiillo colaadeed iyo jahawareer ka taagan caasimadda dalka Liibiya - BBC News Somali
Dhiillo colaadeed iyo jahawareer ka taagan caasimadda dalka Liibiya
Maalmo ka hor ayaa rai'salwasaaraha dowladda ay Qaramada Midoobay taageerto ee Liibiya ayaa cambaareyn adag dusha uga tuuray beesha caalamka.
Fayez al-Serraj ayaa cambaareeyay "aamusnaanta ay beesha caalamka ka aamustay " xoogagga soo weeraray caasimada Tripoli.
Ra'iisalwasaare al-Serraj ayaa BBC u sheegay in dadkiisu ay dareemayaan in beesha caalamku ay meel cidlo ah uga dhaqaaqday.
Xukuumadda midnimada qaran ee ra'iisalwasaare al-Serraj ayaa sheegeysa in ay ciidamadeeda duqeymo u geysteen goobala ay magaalada Tripoli ka haystaan ciidamada janaraal Xaftar.
Afhayeen u hadlay ciidamada Janaraal Xaftar ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay: "Waxaan ku guuleysannay dagaalka dhanka siyaasadda oo waxaan caalamka ku qancinnay in ciidamada qalabka sida ay la dagaalamayaan argagixisada."
Muddo seddax sano ayuu magaalada bariga ku taal ee Benghazi waxa uu kula dagaallamayay maleeshiyaad Islaami ah oo kala duwan, oo ay ku jiraan kooxo gacansaar la leh ururka Al-Qaacida. Hase yeeshee dadka siyaasaddiisa naqdiya ayaa ku eedeeyay in dadka ka soo horjeeda xukunkiisa uu mar kastaa ku calaamadeeyo in ay yihiin "argagixiso".
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Liibiya ayaa sheegaya in sababta janaraal Xaftar uu u billaabay dhaqdhaqaaqa milatari ay tahay Qaramada Midoobey oo ku dhawaaqday "shirweyne qaran" oo ka dhacaya magaalada Ghadames ee dalkaasi Liibiya inta u dhaxaysa 14-16 Abril, si beelaha degaanka loogala xaajo qaabkii doorasho ay dalkaasi uga dhici lahayd.